दुईदशक पहिलेसम्म नेपालमा सयौंकाे संख्यामा आउने पाहुना यूरेसियन कर्ल्यू चरा अहिले फाट्टफुट्ट मात्र देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा त ५० वर्ष जति पछि मात्र यो चरा देखियो ।
आफूलाई अजेय नठानौं, कोरोना रुघा होइन, हत्यारा हो !
इच्छाशक्ति र स्वस्थ शारीरिक स्थिति भए पनि हस्पिटलको उपचारविना म बाँच्थे जस्तो लाग्दैन। काेभिड १९ लाई हल्का रुपमा नलिउँ। बेसार या अरू चलनचल्तीको उपचार पद्धतिमा भर नपरौँ।
कामको मान अर्थात् कुलमान
जताततै अव्यवस्था र बेथितिका कारण समाजमा व्याप्त निराशाबीच सार्थक काम गर्ने जो–कोही पात्र जनतामाझ स्थापित हुनसक्छन् । कुलमानले त्यही गरे जसका लागि उनी नियुक्त गरिएका थिए । आफ्नो व्यावसायिक दक्षता र चारित्रिक निष्ठाका कारण उनी परिणाम दिन सफल भए ।
टाटा मोटर्सको एकमात्र अधिकारिक वितरक, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा. लि. ले बडा दशैं २०७७ को अवसरमा टाटा मोटर्स दशै‌ं अफर सार्वजनिक गरेको छ । यस अफर अन्तर्गत टाटाका विभिन्न मोडलका गाडी खरीद गरी ग्राहकले फाइदा उठाउन सक्नेछन् ।
कोरोना संक्रमणदर घटेपछि सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने
कोरोना संक्रमणको दर कम भएपछि सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने भएको छ। विगत ६ महीनादेखि ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको हो।
केरुङ नाकाबाट सामान भित्र्याउन नस्कदा व्यापार घट्यो
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लामो समय बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लागू हुँदा व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प भयो। पछिल्लो एक महीनायता बजार खुलाइए पनि प्रयाप्त मालबस्तु नहुँदा व्यापार शून्य रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। खासगरी चीन तर्फको केरुङ नाकाबाट मालबस्तु ल्याउन नसक्दा सामग्रीको अभाव भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।